Efa telo herinandro Dr Razafindranazy Jean-Jacques no tratry ny tsy fahasalamana, voan’ny coronavirus. Vao avy niala sasatra taty Madagasikara anefa izy talohan’io namparary azy io, raha ny fanazavana. Nihombo ny aretiny ka nampidirina hopitaly tao Lille, dia izy nodimandry izao. Dr Razafindranazy Jean-Jacques no mpiasan’ny fahasalamana voalohany matin’ity valanaretina covid19 ity tany Frantsa, araka ny nambaran’i Olivier Véran, minisitry ny fahasalamana Frantsay tao amin’ny onjam-peo RTL. “Mahery fo ny raiko, efa tao anatin’ny fisotroan-dronono ary afaka nijanona, saingy nanohy tonga nanampy ireo namany izay tototry amin’ny asany. Niasa izy satria tiany io, izay no fiainany”, hoy ny zanany lahy izay naneho ny alahelony tamin’ny fampahalalam-baovaon’ny Le Parisien. Dokotera ihany koa ny vadin’i Dr Razafindranazy Jean-Jacques. Natoka-monina io andefimandriny io, noho ity valanaretina ity, ka tsy afaka niatrika ny fahafatesan’ny vadiny, raha ny vaovao heno.